Let us share the information of the organizations and places we, ODF Myanmar, have donated from 2010 to 2012 so that you can contact the needy organizations or places directly to make contribution easily. Thank you.
Let us share the places we have donated from 2010 to 2012 so that you can contact the needy organizations or places directly to make contribution easily. Thank you. အကူအညီလိုအပ်သော နေရာများသို့ တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းချင်သော မိတ်ဆွေများ၊ ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ပြုလုပ်လိုသော အဆွေတော်များ အတွက် အဆင်ပြေစေရန် မိမိတို့ လှူဒါန်းခဲ့ဖူးသော နေရာ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၏ အချက်အလက်များအား ဝေမျှပါသည်။ Donations of ODFMyanmar.ORG in 2010Sr. Month Places/Organization Description Address Ref Link1 February Thukha Charity Clinic & Thukha A Lin Library ၁၃/က၊ ဗိုလ်မှုးဗထူးလမ်း၊ http://odfmyanmar.org/ ၄၂-ရပ်ကွက် ၊ donation-to-thukha- (သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းနှင့် သုခအလင်း စာကြည့်တိုက်) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း - charity-clinic-and- ၅၈၀၁၃၃၊၅၈၁၃၆၃ thukha-alin-library/2 March Mya Theingi Orphanage မြသိင်္ဂီသီလရှင်စာသင်တိုက် ၊ ကာယ http://odfmyanmar.org/ (မြသိင်္ဂီသီလရှင်စာသင်တိုက်) (၁၂) လမ်း၊ ဒေါ်ငိုတံတားလမ်းသွယ် donation-for-march- ရွှေနံ့သာ စံပြမြို့သစ်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။ 2010/ ဖုန်း - ၀၉ ၇၃၀ ၀၆၉၂၅၊ ၀၉ ၇၃၁ ၄၉၆၉၀၊ ၀၉ ၇၃၁ ၄၉၇၀၂3 April Happy Heaven Humanitarian Project (ThuKha Yeik Myon) - No.(979-982), Tabinshwehtee http://odfmyanmar.org/ Road,Ward No. 11,North Dagon donation-for-april/ (သုခရိပ်မြုံ - လူမှုထောက်ပံ့ရေး စီမံချက် ၊ မြောက်ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်) Towhship, Yangon, Ph: 581955 - သုခရိပ်မြုံ ၊ အမှတ် (၉၇၉-၉၈၂) ၊ တပင်ရွှေထီးလမ်း ၊ ၁၁-ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် ၊ ဖုန်း - ၀၁-၅၈၁၉၅၅4 May Donations for solving water shortage problem in Dala and - Dala Township, Yangon http://odfmyanmar.org/ Pegu Area cooperating with Myanmar Cyber Charity Group first-donation-for-may- 2010-water-donation/ Website - http://ODFMyanmar.ORG Email - Admin@ODFMyanmar.ORG Page 1 of 6
5 May မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လူငယ်အမျိုးသမီးလေးများ သင်တန်းကျောင်း အမှတ် ၄၉ ၊ မလိခလမ်း ၊ http://odfmyanmar.org/ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ second-donation-for- ဖုန်း - ၆၆၀၃၀၂ may-2010/6 June “Doe Pin” "Aung Kan Thar" monastic orphanage, Pyin Oo Lwin - No.3 Region, KanGyeeKone http://odfmyanmar.org/ Township Village, Pyin Oo Lwin Township, 290/ (ဒိုးပင်အောင်ကံသာ ပရဟိတကျောင်း ၊ ပြင်ဦးလွင်) Mandalay Division - အမှတ် (၃) နယ်မြေ ၊ ကံကြီးကုန်းအုပ်စု ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးတိုင်း7 July Ton Tay Orphanage Mingalar Parahita Training School ဘုရားကြီးရွာ ၊ တွံတေးမြို့နယ် ၊ http://odfmyanmar.org/ ရန်ကုန်တိုင်း။ donation_august-2010/ (ဘုရားကြီးမင်္ဂလာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာသင်ကြားရေးနှင့်မိဘမဲ့ ဖုန်း - ၀၉ ၈၆၁ ၂၃၂၀ မင်္ဂလာပရဟိတဂေဟာသင်တန်းကျောင်း ၊ တွံတေးမြို့နယ်) - ၀၉ ၈၆၁ ၅၀၀၀8 August “Pauktaw” Tawya Monastic Education Center and - Pauktaw Villege, Bee Lin District, http://odfmyanmar.org/ “Mahaluthar” Library Mon Division. donation_august-2010/ - ပေါက်တောကျေးရွာ ၊ (ပေါက်တော တောရဘုန်းတော်ကြီး ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် ပရဟိတပညာတောင်သင်ကျောင်းနှင့် ‘မဟာလူသား’ စာကြည့်တိုက်)9 September "Mayann Chaung”, Voluntary Welfare Organization http://www.leprosyhelp.org/ http://odfmyanmar.org/ ဦးဇော်လွင်ဝင်း (အမှုဆောင် donation-for- (မရမ်းချောင်းကျေးရွာရှိ ပရဟိတ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ) အယ်ဒီတာချူပ်)(Mutdfan.com Sport september/ Journal )Rm- 401, Excel Tower, ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း - 559377 Ext: 640110 September Donation to Mandalay Flood Victims ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုရေးကူညီမှုအသင်း http://odfmyanmar.org/ မန္တလေးမြို့ ရေကြီးမှုကြောင့် နေရာထိုင်ခင်း ၊ အိုးအိမ်နှင့် ၆၂ လမ်း ၊ ၃၃ လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းကြား ၊ donation-to-mandalay- အစာရေစာဒုက္ခဖြစ်နေရသော မိသားစုများ မန္တလေးမြို့ flood-victims/ အတွက်(ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုရေးကူညီမှုအသင်းမှတဆင့် ကူညီလှူဒါန်းသည်။)11 October "GaYuNar San Ain" Orphanage , Muse ကရုဏာစံအိမ် မိဘမဲ့ဂေဟာ http://odfmyanmar.org/ (ကရုဏာစံအိမ် မိဘမဲ့ဂေဟာ ၊ မူဆယ်မြို့) လမ်းသွယ် (၆) ၊ ၄၅ ကုန်း ၊ မူဆယ်မြို့ ၊ lang/en-us/donation- ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း for-oct-2010-md-9/12 November “Kan Baw Za Theingi” Nun Monastery, Muse မိုင်းယု (၁၀၅) မိုင် ကျေးရွာ ၊ http://odfmyanmar.org/ (ကမ္ဘောဇသိင်္ဂီ အမှတ် (၁) သီလရှင်သင်ပညာရေးမူလွန်ကျောင်း ၊ မူဆယ်မြို့နယ် ၊ lang/en-us/donation- မူဆယ်မြို့) ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း for-nov-2010-md-10/ ဖုန်း - ၀၈၂-၅၅၀၀၁13 December “Nann Oo” Monastery, Dala township ဗညားဒလရပ်ကွက် http://odfmyanmar.org/ အောင်ဇေယျပတ်လမ်း ၊ donation-for-december- (နန်းဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊ ဒလမြို့နယ်) ဒလမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း 2010/ Website - http://ODFMyanmar.ORG Email - Admin@ODFMyanmar.ORG Page2of 6
Donations Donations of ODFMyanmar.ORG in 2011Sr. Month Places/Organizations Description Address Ref Link14 January Zeyar Thiri Orphanage ,Taungoo , Pegu Division ဇေယျာသီရိ သီလရှင် စာသင်တိုက်နှင့် http://odfmyanmar.org/2 မိဘမဲ့အမျိုးသမီး 011-jan-donation-md1/ (ဇေယျာသီရိ သီလရှင် စာသင်တိုက်နှင့် မိဘမဲ့အမျိုးသမီး စောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း ၊ ထီးနီကုန်းရွာမ၊ စောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း ၊ တောင်ငူမြို့) တောင်ငူမြို့ ၊ ပဲခူးတိုင်း ဖုန်း - ၀၅၂-၂၃၁၀၄15 February Marga Monastic Orphanage, Sint Kai Township - Kyunn Oo village, Sint Kai http://odfmyanmar.org/f Township, Mandalay Division eb-2011-md13-donation/ (မာဃပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး မူလတန်းကျောင်း) - ’’မာဃပရဟိတ’’ ၊ကျွန်းဦးကျောင်းတိုက် ၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးတိုင်း ဖုန်း- ၀၉-၂၄၅၀ ၆၃၆ ၊ ၀၉ ၄၇၁၁ ၄၂၄၁။16 April Helping Earthquake victims of Shan State တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာလေမြို့နယ်ခွဲ http://odfmyanmar.org/d (တာချီလိတ်ခရိုင်၊ ပါနော့ရွာ ငလျင်ဘေးဒုက္ခသည်များအား ကူညီမှု အိမ်ခြေ ၃၀ အိမ်နှင့် လူဦးရေ ၁၇၅ ဦးရှိ onation-for-april-2011- ပထမအကြိမ်) ပါနော့ရွာ - ပထမအကြိမ် ed-03/ http://odfmyanmar.org/1 st-update_tarlay/17 May “Dawn Education Centre”, Hlaing Thar Yar Township “Dawn Education Centre”, No. http://odfmyanmar.org/d (2087/2088), MinYeKyawSwar 9th St, onation-may-2011-md- (အရုဏ်ဦး ပညာရိပ်သာ ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်) Hlaing Thar Yar Township, Yangon. 15/ Ph: 09 73139826 အမှတ် (၂၀၈၇/၂၀၈၈)၊ မင်းရဲကျော်စွာ (၉)လမ်း၊ (၂၀) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဖုန်း- ၀၉ ၇၃၁ ၃၉၈၂၆18 June Takekhar Yarma nunnery, East Dagon Takekhar Yarma nunnery, 7/8 http://odfmyanmar.org/d crossroad, quarter 5, Anawyahtar onationplanjune-2011- (တိက္ခာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက် ၊ ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း) street, East Dagon Township, md-16/ Yangon. Ph: 09 730 10057 တိက္ခာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက် ၊ ၇/၈ လမ်းဆုံအနီး၊ ၅ ရပ်ကွက် အနော်ရထာလမ်း ၊ ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ ဖုန်း - ၀၉ ၇၃၀ ၁၀၀၅၇ Website - http://ODFMyanmar.ORG Email - Admin@ODFMyanmar.ORG Page3of 6
19 July “Su Taung Pyae” Parahita monastic education - Near Bayarkone Crossroad, Kyauk http://odfmyanmar.org/d centre,Thanlyin Yay Twin Village, Thanlyin onation-july-2011-md-17/ Towhship. Ph: 09-5680582,056- (ဆုတောင်းပြည့် ပရဟိတဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း ၊ 22609 သံလျင်မြို့နယ်) - ဘုရားကုန်းလမ်းဆုံအနီး ၊ ဘုရားကုန်းအုပ်စု၊ ကျောက်ရေတွင်းရွာ၊ သန်လျင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ၊ ဖုန်း- ၀၉-၅၆၈၀၅၈၂၊ ၀၅၆-၂၂၆၀၉20 August “Aung Say Ti” Pariyartti Dhamma school, Pegu - Kyauk Twin Kone , Pegu, Ph: 09-53 http://odfmyanmar.org/d (အောင်စေတီ ပရိယတ္တိ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း ၊ 01996, 052-23953 onationevent-2011-aug- ပရဟိတ အလယ်တန်းနှင့် တွဲဖက် အထက်တန်းကျောင်း ၊ ပဲခူးမြို့) - ကျောက်တွင်းကုန်းရပ် ၊ ပဲခူးမြို့ md18/ ဖုန်း - ၀၉ ၅၃ ၀၁၉၉၆၊ ၀၅၂-၂၃၉၅၃21 September - Helping Earthquake victims of Shan State - “Panok” and ‘Nant Kine Nay’ http://odfmyanmar.org/s (တာချီလိတ်ခရိုင်၊ နန့်ကိုင်းနေရွာနှင့် ပါလောင်းရွာ villages, Tar Lay and Mong Lin econd-donation-ed-03/ ငလျင်ဘေးဒုက္ခသည်များအား ကူညီမှု) townshipsShan State - နန့်ကိုင်းနေရွာ နှင့် ပါလောင်းရွာ ၊ တာချီလိတ်ခရိုင် ၊ ရှမ်းပြည်နယ်22 September “Aung Zay Yar Min” Orphanage, Hlaing Thar Yar “Aung Zay Yar Min” orphanage http://odfmyanmar.org/d Township monastic education centre , Hlaing onation-event-sep-2011- ( အောင်ဇေယျာမင်း မိဘမဲ့ ပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီးသင် TharYar Township,Yangon md-19/ ပညာရေးကျောင်း ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်) -အောင်ဇေယျာမင်း မိဘမဲ့ ပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အလယ်ရွာ (ရွှေပြည်သာတံတားအဆင်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်း23 October Providing drinking water supply for Ga Naing Htawt - Ga Naing Htawt Village, Kyauk Ta http://odfmyanmar.org/2 Village, Kyauk Ta Lone Kyi District, Taunggyi, Shan State Lone Kyi District, Taunggyi, Shan 011-oct-event/ (ဂနိုင်ထော့ရွာ သောက်သုံးရေ ရရှိရေးအတွက် State အဝီစိတွင်းတူးဖော်ခြင်း) - ဂနိုင်ထော့ရွာ ကက္ကူကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်တလုံးကြီးမြို့နယ်ခွဲ ၊ တောင်ကြီးမြို့ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်24 November Emergency Donation to flood victims in Pakokku township - Pakokku Township, Magway http://odfmyanmar.org/fi (ပခုက္ကူမြို့နယ်ရှိ ရေဘေးဒုက္ခသည်များအား ကူညီခြင်း) Division rst_emergency_aid_pako - ပခုက္ကူမြို့နယ် ၊ မကွေးတိုင်း kku/25 December Parahita school for the blind, Near Ma Har Ant Htoo Kan - Parahita school for the blind, Near http://odfmyanmar.org/2 Thar Pagoda, Pyin Oo Lwin Ma Har Ant Htoo Kan Thar Pagoda, 011-dec-md21-event/ Pyin Oo Lwin, Mandalay Division (ပရဟိတ မျက်မမြင် ပညာသင်ကျောင်း၊ Ph: 085-29122 မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားအနီး ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်) - ပရဟိတ မျက်မမြင် ပညာသင်ကျောင်း၊ မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားအနီး ၊ ပြင်ဦးလွင် ၊ မန္တလေးတိုင်း။ ဖုန်း ၀၈၅-၂၉၁၂၂ Website - http://ODFMyanmar.ORG Email - Admin@ODFMyanmar.ORG Page4of 6
26 December -To assist injured victims and left-behind family members - Mingalar Taung Nyunt Township, http://odfmyanmar.org/2 of killed victims caused by the massive explosion and fire Yangon 011_ed-05/ (မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်ရှိ ဂိုထောင်များတွင် ပေါက်ကွဲမှုများနှင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုများကြောင့် - ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက် ၊ ဒဏ်ရာရရှိသူများနှင့် အသက်ဆုံးရှုံးသူများအား မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ကူညီထောက်ပံ့မှုများ) 2012 Donations of ODFMyanmar.ORG in 2012Sr. Month Places/Organizations Description Address Ref Link27 January Defibrillator to General Hospital, West Yangon General Hospital, West Yangon http://odfmyanmar.org/e vent-2012-january-md- (ရန်ကုန်မြို့ အနောက်ပိုင်းဆေးရုံ အထွေထွေဆေးကုသဆောင်၊ 22/ အထွေထွေဆေးကုသဆောင်အတွက် နှလုံးနှိုးစက် လှူဒါန်းခြင်း) အနောက်ပိုင်းဆေးရုံ ၊ ရန်ကုန်မြို့28 February “Aung Taw Mu” parahita and monastic education center, “Aung Taw Mu” parahita and http://odfmyanmar.org/2 Myikyina monastic education center, Myikyina 012-feb-md23-event/ (အောင်တော်မူ ပရဟိတနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင် Township, Kachin State ပညာရေးကျောင်းအား ၊ မြစ်ကြီးနား) အောင်တော်မူ ပရဟိတနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအား ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ၊ ကချင်ပြည်နယ်29 March “Yadanar Aung Myin” Orphanage, Mandalay - “Yadanar Aung Myin” Orphanage, http://odfmyanmar.org/2 (ရတနာအောင်မြင် မိဘမဲ့ကလေးများစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း ၊ Bone Pyan Monastery, Pyi Gyi 012-mar-md-24-event/ မန္တလေးမြို့) Tagoon Township, Mandalay - ရတနာအောင်မြင် မိဘမဲ့ကလေးများစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း ၊ ဘုံပျံတောရအလယ်တိုက် ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့ Website - http://ODFMyanmar.ORG Email - Admin@ODFMyanmar.ORG Page5of 6
30 April Daw Kyi + Daw Nge Parahita Training School, Taungyi - Daw Gyi + Daw Nge Parahita http://odfmyanmar.org/2 Training School, No.77/8, Zaw Ti Ka 012-apr-md25-event/ Street, Yay Aye Kwin Yat, Taungyi (ဒေါ်ကြီးဒေါ်ငယ် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုရေး ပရဟိတဂေဟာ ၊ တောင်ကြီးမြို့) - ဒေါ်ကြီးဒေါ်ငယ် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုရေး ပရဟိတဂေဟာ ၊ အမှတ် ၇၇/၈၊ ဇောတိကလမ်း၊ ရေအေးကွင်းရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့31 May Donating fiber tanks to Dala Township, Yangon - “Nyaung Ngote Toe” primary school http://odfmyanmar.org/2 (ရန်ကုန်တိုင်း ၊ ဒလမြို့နယ်အတွက် ဖိုက်ဘာကန်များ and monastery of “Nyaung Ngote 012-may-md26-event/ လှူဒါန်းခြင်း) Toe” village, Dala township, Yangon Division - ညောင်ငုတ္တိုကျေးရွာ၊ ညောင်ငုတ္တိုအခြေခံမူလတန်းကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ ဒလမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း Website - http://ODFMyanmar.ORG Email - Admin@ODFMyanmar.ORG Page6of 6
Odf report june 2010